Fotoana Indrindra Izao Hananan’ny Firenena Fampihatram-Pampitan-Kafatra eo noho eo, Hoy ny Mpanao Sivana Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2015 10:20 GMT
Ny fihetseham-pon'i Zharov dia nisy akony avy amin'ny mpitarika Tsetsenina Ramzan Kadyrov, izay nanatrika tao amin'ny forum ihany koa. Nasongadin'i Kadyrov fa ny olana voalohany indrindra amin'ny fampiasana raharaham-pifandraisana vahiny dia ny tsy fahampian'ny fanarahamaso sy ny tsy fahafahan'ny sampam-piarovana rosiana miditra amin'ny angotahiriny, izay hitany ho fandrahonana hoan'ny “fiarovam-pirenena.” Afa-tsy hoe afa-miditra amin'ny raharaham-pandefasan-kafatra sy amin'ny angotahirin'ny tambajotra sosialy any amin'ny firenenkafa ny fampiharan-dalàna rosiana, dia heverin'i Kadyrov fa fahendrena ny “mampihena araka izay tratra ny fandrahonana” sy “manapaka ny fantsona izay mety ho azo ampiasaina hampielezana ny fandrahonana tsy misy fisaziana sy tsy misy fisavana manoloana ny filaminantsika.”
Tamin'ny 2014, dia natsangan'i Rosia ny mili-pitadiavana tohanan'ny fanjakana antsoina hoe, Sputnik, izay lazaina amin'izao fotoana izao fa mahasahana ny tokony ho 1%-n'ny tsenan'ny mili-pitadiavana aoamin'ny firenena ary malaza ho manivana ny voka-pitadiavany hanakanany vontoaty hitany ho azo kianina.
Tsara ihany ny milaza fa ny Telegram, raharaham-pandefasan-kafatra an-tsoratra vaovao noforonin'i Pavel Durov, mpanorina ny tambajotra sosialy lehibe indrindra ao Rosia VKontakte, dia nanolotra seha-pifandraisana Rosiana mihitsy ary mahazaka tsara ny fiteny Rosiana ampiasain'ny mpiserasera. Telegram, izay mieboebo ho manana mpisera 62 tapitrisa amin'izao fotoana izao, dia natombok'i Durov tamin'ny 2013, fotoana fohy nialoha ny nandaozany ny VKontakte—sy nandaozany an'i Rosia—nanonona ny tsy fahafahany miasa ao amin'ny firenena “tsy afa-miaraka amin'ny fandraharahan'ny Internety.”